မရှိမဖြစ်သော စကားလုံး "Get" - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on August 15, 2014 at 10:18 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ "Get" ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို ကောင်းကောင်းသုံးတတ်ရင် နေရာတကာမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများအတွက် "Get" ဆိုတဲ့ စကားလုံးသည် ဖြစ်ခြင်းပြကြိယာ (Verb to be) လောက်ပင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာ "Get" ကိုနေရာအမျိုးမျိုး၊ အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ သုံးပုံတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ကြိယာ "get" အတွက် အများဆုံး အသုံးပြုသော ကြောင်းတူသံကွဲ စကားလုံးများ (synonyms) မှာ receive, obtain နှင့် buy တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
I get the daily paper. (receive)
(ကျွန်တော် နေ့စဉ် သတင်းစာကို ရရှိတယ်။)
Next month I will get my first raise in salary. (obtain)
(နောက်လကျရင် ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံးလစာတိုးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။)
He gota45" television set at the auction. (bought)
(သူဟာ လေလံပွဲကနေ ၄၅" TV တစ်လုံး ၀ယ်ခဲ့ပါတယ်။)
Wordsworth ဟာ သူ့ရဲ့ "The World is Too Much With Us" ဆိုတဲ့ ၁၄ လုံးစပ် လင်္ကာထဲမှာ "get" ကို "ဓနဥစ္စာစုဆောင်းခြင်း" (to accumulate wealth) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သုံးထားပါတယ်။
Getting and spending, we lay waste our powers;" လို့ စပ်ဆိုထား ပါတယ်။
"Get" ဆိုတဲ့ ကြိယာမှာ အပိုအဓိပ္ပါယ်တွေများလွန်းလို့ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားသူတွေက ဘယ်လိုများ ရွေးထုတ်နိုင်ကြသလဲလို့ တွေးမိပါတယ်။
ဥပမာ- "get"ကို ၀ိဘတ် "on" နဲ့ တွဲသုံးတဲ့အခါ မတူညီတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။
How are you getting on with your studies? (managing, progressing)
Sally gets on with her mother-in-law. (hasagood relationship)
(ဆယ်လီက သူ့ယောက္ခမနဲ့ အဆင်ပြေတယ်။)
At 93, Mr Biggs is really getting on. (becoming older)
(အသက် ၉၃ နှစ်မှာ မစ္စတာ ဘစ်(ဂ်)(ခ)ဟာ တကယ့်ကို အသက်ကြီးလာပြီပဲ။)
Stop obsessing about the past and get on with your life. (continue)
(အတိတ်ကို စွဲလမ်းမနေဘဲ ကိုယ့်ဘ၀ကို ဆက်ရှင်သန်သွားပါ။)
အောက်တွင် "get" ၏ နောက်ထပ် အသုံးပြုပုံအချို့ကို ထပ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Don't get so nervous when you have an interview. (become)
How do you get to Carnegie Hall? (reach, arrive at)
I can't get used to your new hairdo. (become accustomed to)
(မင်းရဲ့ ဆံပင်ပုံစံအသစ်ကို ငါကျင့်သားမရသေးဘူး။)
So he mispronounced your name; get over it. (forget it, let it go)
(ဒီလိုဆိုရင် သူက ခင်ဗျားရဲ့ နာမည်ကို မှားပြီး အသံထွက်တယ်ပေါ့၊ မေ့လိုက်စမ်းပါဗျာ။)
Now that everyone is in town, let's get together for dinner. (meet)
(အခု လူတိုင်းမြို့ပေါ်မှာ ရောက်နေပြီမို့ ညစာစားဖို့ ဆုံကြရအောင်။)
I know that losing your best friend is difficult, but you'll get through. (survive, overcome)
(အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကို ဆုံးရှုံးရလို့ ခက်ခဲမှန်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျား ကျော်လွှားသွားနိုင်မှာပါ။)
I want my neighbor to get rid of his vicious dog. (dispose of)
(ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းကို သူ့ရဲ့ ဆိုးတဲ့ခွေးကြီးကို ရှင်းပစ်စေချင်တာ။)
She's trapped inadead-end job and wants to get out. (escape)
(သူက တက်လမ်းမရှိတဲ့ အလုပ်မှာ ပိတ်မိနေလို့ ထွက်ပြေးချင်နေတာ။)
We hope to get away this weekend. (travel, go somewhere)
(ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေ ခရီးထွက်ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။)
I've tried and tried to master algebra, but I just don't get it. (understand)
(အက္ခရာသင်္ချာကို တတ်အောင် ထပ်ခါ ထပ်ခါ ကြိုးစားပေမဲ့ နားကို မလည်နိုင်ဘူးဗျာ။)
Get ကို အသုံးပြုတဲ့ အမိန့်ပေးချက်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Get busy! Getamove on! (Hurry up)
Get lost! (Stop bothering me and go away!)
အောက်တွင် ဖော်ပြမဲ့ အမိန့် (၂)ခုကတော့ အခြေအနေကို လိုက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ကွဲလွဲပါတယ်။
ဒီအသုံးအနှုန်း (၂)မျိုးစလုံးဟာ "ငါ့ရှေ့က ထွက်သွားစမ်း"ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
(ထွက်သွားစမ်း၊ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် နောက်ထပ် ဘယ်တော့မှ မမြင်ချင်ဘူး)
ဒါ့အပြင် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နေရာတစ်နေရာက အမြန်ထွက်သွားခိုင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
"Get out of here! The dam is about to burst."
(ဒီနေရာက ထွက်သွားကြ။ ရေကာတာကျိုးတော့မယ်။)
တစ်ခါတစ်ရံကြတော့လည်း ၄င်းတို့ကို မယုံကြည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ဗန်းစကားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
"You pay only $600amonth for an apartment in Manhattan? Get out of here!"(မင်ဟက်တန်မှာ တစ်လကို တိုက်ခန်းခ ဒေါ်လာ ၆၀၀ ပဲ ပေးရတယ်။ သွားစမ်းပါ။)
တစ်ရက်လောက် ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ပြန်နားထောင်ကြည်ပါ။ "Get" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသုံးပြုတဲ့ အကြိမ်ကို သိရရင် သင်အံ့သြသွားနိုင်ပါတယ်။
Dailywritingtips.com မှ Maeve Maddox ၏ The Indispensable ‘Get’ ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အငျြဂလိပဘြာသာမှာ "Get" ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစလြုံးကို ကောငြးကောငြးသုံးတတရြငြ နရောတကာမှာသုံးလို့ရပါတယြ။ အငျြဂလိပစြကားပှောသူမွားအတှကြ "Get" ဆိုတဲ့ စကားလုံးသညြ ဖှစခြှငြးပှကှိယာ (Verb to be) လောကပြငြ မရှိမဖှစြ လိုအပပြါတယြ။ ဒီသငခြနြးစာမှာ "Get" ကိုနရောအမွိုးမွိုး၊ အခှအနေအမွေိုးမွိုးမှာ သုံးပုံတှကေိုဖောပြှထားပါတယြ။
ကှိယာ "get" အတှကြ အမွားဆုံး အသုံးပှုသော ကှောငြးတူသံကှဲ စကားလုံးမွား (synonyms) မှာ receive, obtain နှငြ့ buy တို့ပဲဖှစပြါတယြ။
(ကွှနတြော နစေ့ဉြ သတငြးစာကို ရရှိတယြ။)
(နောကလြကရွငြ ကွှနတြော ပထမဦးဆုံးလစာတိုးရရှိမှာဖှစပြါတယြ။)
(သူဟာ လလေံပှဲကနေ ၄၅" TV တစလြုံး ဝယခြဲ့ပါတယြ။)
Wordsworth ဟာ သူ့ရဲ့ "The World is Too Much With Us" ဆိုတဲ့ ၁၄ လုံးစပြ လငျြကာထဲမှာ "get" ကို "ဓနဥဈစာစုဆောငြးခှငြး" (to accumulate wealth) ဆိုတဲ့ အဓိပျပါယနြဲ့ သုံးထားပါတယြ။
Getting and spending, we lay waste our powers;" လို့ စပဆြိုထား ပါတယြ။
"Get" ဆိုတဲ့ ကှိယာမှာ အပိုအဓိပျပါယတြှမွေားလှနြးလို့ အငျြဂလိပစြာ သငကြှားသူတှကေ ဘယလြိုမွား ရှေးထုတနြိုငကြှသလဲလို့ တှေးမိပါတယြ။ဥပမာ- "get"ကို ၀ိဘတြ "on" နဲ့ တှဲသုံးတဲ့အခါ မတူညီတဲ့ အဓိပျပါယလြေးမွိုးရရှိနိုငပြါတယြ။
(ဆယလြီက သူ့ယောကျခမနဲ့ အဆငပြှတယြေ။)
(အသကြ ၉၃ နှစမြှာ မဈစတာ ဘစြ(ဂြ)(ခ)ဟာ တကယြ့ကို အသကကြှီးလာပှီပဲ။)
(အတိတကြို စှဲလမြးမနဘေဲ ကိုယြ့ဘဝကို ဆကရြှငသြနသြှားပါ။)
အောကတြှငြ "get" ၏ နောကထြပြ အသုံးပှုပုံအခွို့ကို ထပဖြောပြှလိုကပြါတယြ။
(မငြးရဲ့ ဆံပငပြုံစံအသစကြို ငါကငွ့သြားမရသေးဘူး။)
(ဒီလိုဆိုရငြ သူက ခငဗြွားရဲ့ နာမညကြို မှားပှီး အသံထှကတြယပြေါ့၊ မလေို့ကစြမြးပါဗွာ။)
(အခု လူတိုငြးမှို့ပေါမြှာ ရောကနြပှေီမို့ ညစာစားဖို့ ဆုံကှရအောငြ။)
(အခစွဆြုံးသူငယခြငြွးကို ဆုံးရှုံးရလို့ ခကခြဲမှနြးသိပါတယြ။ ဒါပမေဲ့ ခငဗြွား ကွောလြှားသှားနိုငမြှာပါ။)
(ကွှနတြောကြ ကွှနတြော့ရြဲ့ အိမနြီးနားခငြွးကို သူ့ရဲ့ ဆိုးတဲ့ခှေးကှီးကို ရှငြးပစစြခငွေတြာ။)
(သူက တကလြမြးမရှိတဲ့ အလုပမြှာ ပိတမြိနလေို့ ထှကပြှေးခငွနြတော။)
(ဒီစနေ၊ တနငျြဂနှေ ခရီးထှကဖြှစဖြို့ ကွှနတြောတြို့ မွှောလြငြ့ပါတယြ။)
(အကျခရာသခငျြွာကို တတအြောငြ ထပခြါ ထပခြါ ကှိုးစားပမေဲ့ နားကို မလညနြိုငဘြူးဗွာ။)
Get ကို အသုံးပှုတဲ့ အမိနြ့ပေးခကွတြှကေို အောကမြှာ ဖောပြှလိုကပြါတယြ။
Get lost! (Stop bothering me and go away!) (သှားစမြး၊ လာနှောကယြှကမြနနေဲ့။)
အောကတြှငြ ဖောပြှမဲ့ အမိနြ့ (၂)ခုကတော့ အခှအနေကေို လိုကပြှီး အဓိပျပါယကြှဲလှဲပါတယြ။
ဒီအသုံးအနှုနြး (၂)မွိုးစလုံးဟာ "ငါ့ရှကေ့ ထှကသြှားစမြး"ဆိုတဲ့ အဓိပျပါယရြှိနိုငပြါတယြ။
(ထှကသြှားစမြး၊ ခငဗြွားကို ကွှနတြော နောကထြပြ ဘယတြော့မှ မမှငခြငွဘြူး)
ဒါ့အပှငြ အကှောငြးတစခြုခုကှောငြ့ နရောတစနြရောက အမှနထြှကသြှားခိုငြးတဲ့ အဓိပျပါယလြညြး ရှိနိုငပြါတယြ။
(ဒီနရောက ထှကသြှားကှ။ ရကောတာကွိုးတော့မယြ။)
တစခြါတစရြံကှတော့လညြး ၄ငြးတို့ကို မယုံကှညနြိုငဘြူးဆိုတဲ့ အဓိပျပါယရြတဲ့ ဗနြးစကားလညြး ဖှစနြိုငပြါတယြ။
"You pay only $600amonth for an apartment in Manhattan? Get out of here!"(မငဟြကတြနမြှာ တစလြကို တိုကခြနြးခ ဒေါလြာ ၆၀၀ ပဲ ပေးရတယြ။ သှားစမြးပါ။)
တစရြကလြောကြ ကိုယပြှောတဲ့စကားကို ကိုယြ့ဖာသာကိုယြ ပှနနြားထောငကြှညပြါ။ "Get" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အသုံးပှုတဲ့ အကှိမကြို သိရရငြ သငအြံ့သှသှားနိုငြပြါတယြ။
Dailywritingtips.com မှ Maeve Maddox ၏ The Indispensable ‘Get’ ကို ကိုးကားဘာသာပှနထြားတာ ဖှစပြါတယြ။
Permalink Reply by Snow Snow on December 15, 2014 at 13:55
thanks so much.I want to know "keep"
Permalink Reply by Naing Linaung on December 16, 2014 at 6:22
Permalink Reply by san san on December 16, 2014 at 13:04
Permalink Reply by Hsu Thinzar Nyein on June 5, 2015 at 10:42
Permalink Reply by Thu Zar on June 9, 2015 at 20:44
Permalink Reply by thin pyant pyant on July 17, 2015 at 13:30
Permalink Reply by Khaing Thazin Oo on September 18, 2015 at 20:46